विद्युतीय चेक क्लियरिङ्गमा के मा कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले विद्युतीय चेक क्लियरिङ्गमा लाग्ने प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीले विद्युतीय चेक क्लियरिङ्ग प्रणाली, अन्तर बैंक विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली तथा कनेक्ट आइपिएस ई–पेमेन्टमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण...
रङ्ग बदल्ने कपडा
छेपारोले छिन–छिनमा रंग फेर्ने गरेको त सबैलाई थाहै छ, अब तपाईँले लगाउने कपडाले पनि रंग परिवर्तन गर्ने प्रविधिको विकास भएको छ । अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल फ्लोरिडाका वैज्ञानिकहरुले उक्त प्रविधिको विकास गरेका हुन् । उनीहरुले रंग परिवर्तन हुने...
लेनोभोले ThinkPad P52 ल्यापटप सार्वजनिक गर्यो
विश्वमा ८ जिबी र्‍यामसहितको स्मार्टफोन पनि आउला भन्ने सायदै कसैले सोँचेका थिए, जुन अहिले यथार्थ बनेको छ । यस्तै कुनै ल्यापटप १ सय २८ जिबी र्‍यामको हुनसक्ला भन्ने कुरा पनि धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ ।...
के तपाई मोबाईल बाट ईन्टरनेट चलाउनु हुन्छ ? त्यसो हो भने खुसिको खवर छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मोबाइल इन्टरनेट शुल्क विस्तारै कम गर्दै लैजाने बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मोबाइल इन्टरनेट केही महँगो भएपनि आगामी दिनमा त्यसलाई सस्तो...
सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाईबर
११ असार, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने बताएको छ । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाईबर बिछ्याउने योजनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित...
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्दै अरुण गाउँपालिका
भोजपुर, ३० जेठ । भोजपुरको पुर्वमा रहेको अरुण गाउँपालिका सूचना प्रविधिमा अगाडी बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भोजपुर जिल्ला कै नमुना बनाउँने उद्धेश्यका साथ अघि वढेको छ । यसका लागि अरुण गाउँपालिकाले अर्थिक...